SEHO - သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြေရှင်းချက်သည်2မီလီယံ NC တံတား Mills ကထောက်ပံ့ရေး
2 မီလီယံ NC တံတား Mills က / ကျနော်တို့ 30 ကျော်နှစ်ပေါင်းသုံးစက်တွေရောင်းများ၏ဈေးကွက်မှာမတ်တပ်ရပ်ပါပြီ။ အသုံးပြုသောစက်အပြင်, ငါတို့သည်လည်းနေဆဲတံတား Mills ကအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့နှင့်ဖောက်သည်များအတွက်မတူကွဲပြားမှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူကျေနပ်ဖို့ angular Mills ဌာနမှူးအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။
2 မီလီယံ NC တံတား Mills က
Home အမျိုးအစား နယူးသတ္တုအလုပ်အဖွဲ့စက်များ SEHO NC တံတား Mills က
2 မီလီယံ NC တံတား Mills က, နယူးနှင့်တပတ်ရစ်ထောက်ပံ့ရေး 33 ကျော်နှစ်များ - SEHO
SEHO INDUSTRY CO., LTD. 1995 ကတည်းကအသစ်2မီလီယံ NC တံတား Mills ကတစ်ဦးပေးသွင်းသည်နှင့်ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် CNC စက်တွေ, ကြိတ်စက်နှင့်ကြိတ်အကြီးအကဲများ, နှင့်စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
2 မီလီယံ NC Plano Mills က
2 မီလီယံ NC တံတား Mills က BM-2015
BM-2015 မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတံတား Mills ကကမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန် '' စက်ဖြစ်ပါသည်, ထို 2meter X- ဝင်ရိုးခရီးသွားနှင့် 1.5meter Y ကို-ဝင်ရိုးခရီးသွားနှင့်အတူလာ။ အဆိုပါရွေ့လျားလက်ဝါးကပ်တိုင်ရောင်ခြည်ဒီဇိုင်း workpiece များအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ဧရိယာဆောင်တတ်၏, ထို့အပြင်စက်ကိုပိုပြီးတည်ငြိမ်အောင်နှင့် tools တွေကိုဖြတ်တောက်၏ပွန်းပဲ့ကိုလျှော့ချဖို့ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ workpiece အကြားအကွာအဝေးကိုအတိုကောက်။ ရွေ့လျားလက်ဝါးကပ်တိုင်ရောင်ခြည်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူမ workpiece ပြုစုပျိုးထောင် Sub-စားပွဲပေါ်မှာသုံးစွဲဖို့ရှိပါတယ်လိုအပ်ပါသည်ကအလုပ်သမားချွေတာရေးနှင့်အချိန်ချွေတာအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးသည်။
SEHO BM စီးရီး NC တံတားစက်များအစဉ်အလာများနှင့် CNC စက်တွေရဲ့အမြတ်အစွန်းများပါဝင်သည်ကြောင့်လည်းဖော်ရွေတပ်ဆင်ထားစက်အော်ပရေတာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်မသေချာမရေရာပြဿနာတွေလျှော့ချဖို့ SYNTEC controller ကို system ကို operate, အားကြီးသောစက်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူကြွလာ။ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အပါဆုံး, လက်တွေ့ကျသောစီးပွားရေးနှင့်သင့်လျော်သောကိရိယာများသည်။
အဆိုပါ positional တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် CNC ဂီယာ (ဘောလုံးကိုဝက်အူနဲ့ servo motor ကို) တပ်ဆင်ထား 1. X / Y / Z ကိုပုဆိန်။
crossbeam, ကော်လံများနှင့်စက်အခြေစိုက်စခန်း ချ. 2. အရည်အသွေးမြင့် Meehanite ဟာအလျှော့တိကျနဲ့မာကျောမှုသေချာပါစေ။
မိုးသည်းထန်စွာရှများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သော 3. Multi-ခြေလှမ်း variable ကိုဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း။
4. က X / Y / Z ကိုတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်တုန်ခါမှုအာမခံဖို့ boxway ပုဆိန်။ (Opt ။ linear လမ်းညွှန်လမ်း)
အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါအကောင်းဆုံးအလျားလိုက်တိကျမှန်ကန်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန် "V ကို" ပုံသဏ္ဍာန်ဆလိုက်လမ်း, ကျယ်ပြန့်နှင့်ခိုင်ခံ့သောစက်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူ 5. ။
6. မြင့်မားသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူအသငျ့ - လေ့လာသင်ယူရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူစွမ်းဆောင်ရည်တန်ဖိုးကို SYNTEC Controller, ။ (Opt ။ FANUC / MITSUBISHI controller ကို)
X ကိုဝင်ရိုးတန်းခရီးသွား: 2000mm
Y ကဝင်ရိုးတန်းခရီးသွား: 1500mm
Z ကိုဝင်ရိုးတန်းခရီးသွား: 300mm / 10HP
Dist ။ 1530mm: ကော်လံများအကြား
Dist ။ 1000mm: စားပွဲတင်ရန်ဗိုင်းလိပ်တံနှာခေါင်းကနေ
စားပွဲတင်အရွယ်အစား: 2000 x ကို 1200mm
Crossbeam Up ကို-Down မော်တော်: 2HP
စက် Size: 6180x3300x2900mm
std ။ ပစ္စည်းများ
1. ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ဦးခေါင်းမော်တာ: 10HP
2. ဘေးထွက်ကြိတ်ဦးခေါင်းမော်တာ: 10HP
3. က X / Y / Z ကိုဘောလုံးကိုဝက်အူဂီယာစနစ်ကပုဆိန်။
4. က X / Y / Z ကို servo motor ကိုမောင်းနှင်စနစ်ကပုဆိန်။
အဖွဲ့ချုပ် (အင်ဗာ) ဖြတ်တောက်ဘို့ 5. Variable မြန်နှုန်း။
အလုပ်စားပွဲ၏ရှေ့ / နောက်မှာ 6. အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအဖုံး။
ဘေးထွက်ကြိတ်ဦးခေါင်း၏အဖွင့် / ဆင်းမှာ 7. သံမဏိအဖုံး။
10. Tool ကိုသေတ္တာနှင့်ကိရိယာ။
11. စစ်ဆင်ရေး / ကို Maintenance ကို manual ။
Opt ။ ပစ္စည်းများ
1. Pneumatic tool ကိုညှပ် (NT သို့မဟုတ် BT) ။
2. ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ဦးခေါင်းမော်တာ: 15HP
3. Z ကိုဝင်ရိုး 400mm သို့မဟုတ် 600mm ခရီးသွားလာ။
4. Dist ။ ဗိုင်းလိပ်တံနှာခေါင်းကနေစားပွဲ 1200mm ရန်။
5. Linear အကြေး။
6. angular ကြိတ်ဦးခေါင်း (90 ဒီဂရီဦးခေါင်း, extension ကိုဦးခေါင်း, တစ်လောကလုံးဦးခေါင်း) ။
6meters အထက်စက်အရွယ်အစား (X ကိုဝင်ရိုးခရီးသွား) စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ပိုပြီးအမျိုးမျိုး machining စေရန် SEHO angular ကြိတ်အကြီးအကဲများနှင့်အတူ option ။